व्यवस्थापन भन्छ : ७–८ दिनभित्र सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको परीक्षण सकिन्छ
काठमाडौं । अहिले ४५६ मेगावावटको माथिल्लो तामाकोसीको प्राविधिक परीक्षण (वेट टेस्ट) भइरहेको छ । यही क्रममा पेनस्टक पाइपको जोर्नी (म्यानहोल) बाट पानी चुहिएपछि परीक्षणको काम रोकी मर्मत गरिरहेको छ । मर्मतको काम सकिएपछि करिब एक सातामा परीक्षणको सबै काम पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले बिहीबार (जेठ ६ गते) विज्ञप्ति जारी गरी परीक्षणलाई २४ सै घन्टा निरिक्षण र अनुगमन गरी काम भइरहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– थप प्राविधिक समस्या नआए तथा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले आयोजनाका कामदार र कर्मचारीमा कुनै असर देखा नपरे परीक्षण सुचारु भएको ७ देखि ८ दिनभित्र सिभिल संरचनाहरू र हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको वेट टेस्ट सक्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
परीक्षणको काम ७¬–८ दिनमा सकिने त भनियो तर त्यहाँ ‘कोभिड महामारीले कर्मचारीमा असर देखा नपरे र प्राविधिक समस्या नआए’ भन्ने वाक्यांश लेखिएको छ । यसले फेरि पनि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको समय अनिश्चित बन्दै गएको इंगित गरेको छ ।
अहिले पनि आयोजनाका केही कर्मचारीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेको सूचना आइरहेको छ । आयोजनास्थल पूर्ण सिल गरी अर्थात् सुरक्षित उपाय अपनाएर काम भइरहे पनि को कतिबेला कसरी संक्रमित हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । उता प्राविधिक परीक्षको काम चलिरहेकाले म्यानहोलमा जस्तै कति बेला कहाँ समस्या आउँछ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।
आयोजनाकै उल्लेखित भनाइलाई आधार मान्ने हो भने विद्युत् उत्पादन हुने मिति अझै सर्दै जाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । आयोजनाका अनुसार म्यानहोलको सुधार सन्तोषजनक भइरहेको र २–३ दिनभित्र सम्पन्न गरी पेनस्टक, सुरुरू र बाँकी हाइड्रो मेकानिकल उपकरणको परीक्षणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
आयोजनाका अनुसार ३७३ मिटर अग्लो तल्लो पेनस्टक साफ्टको परीक्षण सकिएको छ । ३१० मिटर अग्लो माथिल्लो पेनस्टक साफ्ट र यसलाई जोड्ने १०० मिटर लामो तेस्रो पेनस्टक परीक्षण गर्ने क्रममा उक्त दुई वटा पेनस्टक पाइनमा जडान भएका दुई वटा म्यानहोलको जोर्नीबाट पानी रसाएको थियो । त्यसको मर्मत गरी काम सुचारु गरिरहँदा पुनः एउटा म्यानहोलको जार्नीबाट थोरै पानी चुहिएको हुँदा काम रोकी सुधारको काम भइरहेको छ ।
वेट टेस्टको क्रममा भूमिगत विद्युत्गृह नजिकै पेनस्टक जडान गरिएको सबैभन्दा संवेदनशील उपकरणको रूपमा रहेको एमएसओभी (मेन सट–अफ भल्भ) तथा ६ वटा युनिटहरूमा जडान गरिएका एमआइभिएस (मेन इनलेट भल्भ) हरूको प्राविधिक चेकजाँच र परीक्षण भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यस्तै, ८२२ मिटर वाटर हेड (विद्युत्गृहमा पानी झर्ने उचाई) धान्नुपर्ने एमओएसभी र एमआईभिएसको प्राविधिक परीक्षण भइसकेको छ ।
१. फेरि भूमरीमा फस्तै माथिल्लाे तामाकाेसी, विद्युत् उत्पादनकाे समय अनिश्चित र अन्याेल
२. माथिल्लो तामाकोसी कोरोना चपेटामा, यस्ता छन् लागत दोब्बर हुनुका कारणहरू !
३. सबै युनिट सञ्चालन हुन अझै ४ महिना लाग्ने, श्रेष्ठ भन्छन् : सुरुङमा पानी हाल्दैमा विद्युत् उत्पादन हुँदैन
४. उच्चस्तरीय सरकारी टोलीद्वारा तामाकोसीको अवलोकन, सेटलिङ बेसिनमा पानी छोडियो
५. तामाकोसीको सुरुङमा आजबाट पानी भर्न सुरु, सचिवसहितको टोली आयोजनास्थलतर्फ
६. तामाकोसीको सुरुङ परीक्षण गर्न पानी भर्ने तयारी, लागत सय अर्ब छेउछाउ पुग्यो